दु’खमा साथ दिएकी श्रीमती पो’इला गएकै भएपनि फ’र्केर आउ भन्दै श्रीमान रुँ’दै (भिडियो हेर्नुहोस) - ABNews Nepal
दु’खमा साथ दिएकी श्रीमती पो’इला गएकै भएपनि फ’र्केर आउ भन्दै श्रीमान रुँ’दै (भिडियो हेर्नुहोस)
Dec 11, 2021 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, taja khabar, taja khabar nepal, tajakhabar
मोरगंको उर्लावारी ४ का मोहन राजवंशी १२ वर्ष साउदीमा बसेर प’सिना बगाए । उनी अव घरमै बस्ने र परिवारसंग समय विताउने योज’ननामा नेपाल फर्किए । विवाह भएको वर्षौ पछि वु’ढेसकालमा श्रीमती ह’रा’एपछि अहिले उनका श्रीमान रुँ’दै मिडियामा सा’र्वजनिक भएका छन् । उनले दु’खमा साथ दिएकी श्रीमती पो’इला गएकै भएपनि फर्केर आए आफुले स्वी’कार गर्ने बताएका छन् ।
छोराछोरी घरमै हुँदा आमा हिडेकी हुन् । छोराछोरीले माघमा आमाको ब्यव’हार देखेर शं ‘का गरेका थिए । उनीहरुले आमालाई सोधे । एक जना साथीको बुवाले कान्छो छोरालाई बोलाएर आमाको बारेमा सुनाएका थिए । तेरो आमाले अर्कै पु’रुषलाई भेट्ने गरेको हामीले देखेका छौं भनेर कान्छा छोरालाई सुनाइदिए, उनले आमालाई आएर सोधे आमाले छोराछोरीको क’सम खाएर त्यस्तो होइन भनेपछि छोराछोरीलाई पनि वि’श्वास लागेको बताए ।
एक साता अघि विदेशवाट नेपाल आएका मोहनले अहिले पनि श्रीमतीलाई फ’र्केर आउन आ’ग्रह गरेका छन् । उनीहरुका दुई छोरा र एक छोरी हुर्कीसकेका छन् । दुई छोरा मध्य एक छोरा २२ र अर्का १४ वर्षका छन्, छोरी २४ वर्षकी भइसकिन् । उनीहरुको वि’वाह गर्नुपर्ने वेलामा श्रीमती जि’वन परियारसंग हिडेपछि पुरुष अहिले रुँदै मिडियामा आएका छन् । जसका लागि दु’ख गर्न भन्दै विदेश गएका थिए उनै परिवारले वुढेसकालमा यस्तो धो ‘का दिए प छि उनलाई वि’ ष खा उँ की भनने लाग्छ, उनले दु’ख मनाउ गर्दै भनेका छन् । पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेर्नुहोस।
यस्तै,सडकमा गुडिरहेको माइक्रोबसलाई मालवाहक ट्रकले ठ’क्कर दिँदा माइक्रोबस घरभित्र छिरेको छ । सडकमा चलिरहेको माइक्रोबसलाई पछाडीबाट ट्रकले ठ’क्कर दिएपछि अनियन्त्रित भएर राजमार्ग नजिकै रहेको घरमा हु’त्तिएको हो । एउटै साइडमा रहेको बा ३ ख ८६३० नम्बरको उक्त माइक्रोबसलाई ६ ख ५५०३ नम्बरको ट्रकले पछाडीबाट ठ’क्कर दिएको प्र’हरीले जनाएको छ । घा’इते यात्रुहरुको भरतपुरमा उपचार भइरहेको छ ।
पृथ्वीराजमार्गको इच्छाकामना गाउँपालिका–३ फिस्लिङ बजारमा बिहीबार बिहान ९ बजेतिर उक्त दु’र्घटना भएको हो । दु’र्घटना हुँदा काठमाडौंबाट अर्घाखाँची जादै गरेको माइक्रोबसका ४ जना यात्रुहरु सामान्य घा’इते भएका छन् ।
विदेश जान भनेर घरबाट हिँडेकी कुमारी १ महिना देखि बेपत्ता
बिचरा भर्खर ज’न्मिएका शि’शुलाई यति चिसोको रातमा जंगलमा कस्ले छो’ड्यो ?
रिप बाबु ! एउटा सानो गल्तीले ८ वर्षीय बालक आफ्नै घरको गेट’मै अस्ता’एका थिए
Jan 20, 2022 abnewsnepal
सौता सौता बिच बाटोमै यस्तो , ढाटेर कान्छी ल्याएको श्रीमान फस्यो फन्दामा
छोराछोरी नभएका वृद्व आमाबुबालाई कुकुरले नाचेरै पाल्दै,छोराछोरी भन्दा बढी माया कुकुरले गर्दैछ
दुनियाँको मनमा बसेकी अभिनेत्रीको मृत शरीर दुई टुक्रा अवस्थामा बोरामा फेला